Class Code : SFU-DFM-03-01 (Online)
SFU Professional Diploma in Financial Management Online Course
စီးပွားရေးလောကမှာရေရှည်အောင်မြင်နိုင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်မှီဖို့ဆိုရင် လုပ်ငန်းအတွင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ ရင်းနှီးထားလဲ? ဒီရင်းထားတာတွေဟာ အချိန်ကာလ အတိုင်းအတာ ဘယ်လောက် အကြာမှာ အရင်းကျေမလဲ၊ အမြတ်ထွက်မလဲ အချိန်ကွာခြားမှူပေါ် မူတည်၍ ငွေတန်ဖိုးကဘယ်လိုပြောင်းလဲနေပုံ စတာတွေကိုတိတိကျကျ သိနေရမယ်။ အလေအလွင့် စရိတ်စက နည်းစွာနဲ့ ရလဒ်ကောင်းအောင်၊ စနစ်တကျ သုံးစွဲနိုင်အောင်ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ရလဒ်အခြေအနေအပေါ် အခြေခံပြီးတော့ decision ချရတဲ့အတွက်ကြောင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဘာသာရပ်များထဲမှ Financial Management ဟာ အရေးပါတဲ့ ဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် Department တွေကတင်လာတဲ့ အသုံးစရိတ်၊ ငွေအဝင်အထွက် တွေကိုကြည့်ပြီး Management Decision တွေ ပြုလုပ်ရပါတယ်။၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာလည်း စဉ်းစားတတ်ဖို့၊ company ရဲ့ ငွေလည်ပတ်မှုအခြေအနေ၊ ငွေပြန်ရလွယ်မှု၊ company ရဲ့ final Accounts တွေဖြစ်တဲ့ အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွေ၊ Balance sheet တွေ၊ cash flow statement တွေကို သင်ကြားပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေ တဲ့အခါမှာShare တွေရဲ့ Value ကိုဘယ်လို သတ်မှတ်မလဲ၊ Bond တွေရဲ့ feature တွေကဘာတွေလဲ၊ Bond အမျိုးအစားတွေအကြောင်းသင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Investor တွေအနေနဲ့ Investment ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိင်မည့် Riskတွေနဲ့ ပြန်ရလာနိုင်တဲ့ Return Risk တွေကိုပါ ချိတ်ဆက်သင်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်တွင် ငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး လုပ်ကိုင်နေသူများ၊
ဌာနအလိုက် မန်နေဂျာများနှင့် ငွေကြေးစီမံ ခန့်ခွဲမှု အပိုင်းမှာ တာဝန်ယူထားရသောသူများ သိသင့်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုအပိုင်းတွေနဲ့ ကျွမ်းဝင်စေမည့် သင်တန်းဖြစ်ပါသည်။
Finance ပိုင်းကို စိတ်ပါဝင်စားသူများ
SFU Professional Diploma in Financial Management တွင်အဓိက ဘယ်လိုModule တွေသင်ကြားရမှာလဲ?
Module4-Ethics & Contemporary Issues in Financial Management
*ICM Financial Management Old Student - ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် (Save)